दसैँका ती उत्सवमय दिनहरु | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ कार्तिक १, शनिबार ०८:१६ गते
पुस्तक पढ्नुभन्दा प्रकृति पढेर धेरै गुणा फरक ज्ञान हाँसिल गर्न सकिँदो रहेछ । अझ लेखनकलालाई आफ्नो वृत्ति बनाएका लेखकले त आफ्ना बाल्यवयका परिघटनाहरुलाई लेखेर कहिल्यै नसक्ने रहेछन् । यस्ता ज्ञान ममा आएको धेरै भएको छैन । कहिलेदेखि आयो त्यो झट्टै सम्झन सकिरहेको पनि छैन ।
‘दसैँ आयो । खाऊँला पिऊँला । कहाँ पाऊँला ? चोरी ल्याऊँला । धत्त पापी म त छुट्टै बसूँला ।’ सोह्रश्राद्ध सकिएर नौरथा लाग्ने लाग्ने बेलामा चारैतिरका परिवेशमा ढोलक बजेको सुनिन्थ्यो । बाक्लो ग्रामीण वस्तीमा यो एक निःशुल्क जनाउ हुन्थ्यो, दसैँका लागि । हामी ढोल बजाउँदै घरघर आउने ती बूढा पोयाका दलित जातिका मान्छेहरुलाई बालसुलभ बोलीमा ‘ढोलिया’ भन्थ्यौँ । कुन कुन जातिका मानिस हुन्थे तिनीहरु ? हामी खोजीखबरी केही गर्दैनथ्यौँ । बाआमाले पनि नाटीखुटी केही भन्थेनन् । केटाकेटी बुद्धिले त्यो खुट्याउन सक्ने कुरो पनि भएन । अनि बज्न थाल्थे रेडियो नेपालमा मालश्रीका सुरम्य कर्णप्रिय धुनहरु । मालश्रीका धुन, देवीभजन र यदाकदा सूरअसूरका रेडियो नाटकसँगै केटाकेटीमय पारामा ‘दसैँ आयो’ जस्ता बालगीत पनि उफ्रीपाफ्री गरेर गाइन्थ्यो । हार्दिकता लपक्कै गाँसिएका थिए, ती दसैँका दिनहरुमा ।
पाकेको महिनाको तलब होस् या रिनपान गरिएको पैसो । कहिले त खसीबोका विक्री गरेर आएका थोरबहुत पैसा केही पत्तोफाँट हुँदैनथ्यो । ‘शोक न सुर्ता भोक न भकारी’ भनेझैँ शोधखोजको पर्वाह पनि रहन्थेन । बाल रहरका बैंकमा भएका जति पनि चेकहरु साट्ने सुविधा थियो, उसबेलाका दसैँतिहारजस्ता पार्विक माहोलमा हामी केटाकेटीहरुलाई ।
त्यस बेलामा हाटको चलन उधुमै हुने । सोमबार र बिहीबार हाम्रा घरदेखि नजिकै साप्ताहिक हाट लाग्ने गर्थे । हिँङदेखि हर्दी (बेसार) सम्म फलामदेखि सिलामसम्म सबैथोक हाटमै सस्तो मोलमा पाइने र मोलमोलाइ गर्ने छूट पनि हुने भएकाले कुन धनी कुन गरिब सबैले आफूलाई सोमबार र बिहीबार अनिवार्यरुपमै हटारू बनाउँथे । नगदको चलन यदाकदा कर्मचारीले मात्रै गर्दथे । गृहस्थीका लागि अन्नपात बेचेरै सौदा खरिद्नु एकमात्र उपाय हुन्थ्यो । नबेचे निरूपाय । हामीचाहिँ नगदजिन्सी दुवैको प्रयोग गर्दथ्यौँ । आखिर हाम्रो परिचय कर्मचारीको परिवारमा पर्दथ्यो ।
घरपायक जागिरको मज्जा नै बेग्लै । बा भूमि प्रशासनमा खरिदार हुनुहुन्थ्यो ।
सम्झनाका पत्रहरुमा चाङ लागेका ती दसैँहरुलाई सबैभन्दा मुन्तिरबाट झिकेर हेर्ने हो भने सप्तरङ्गी इन्द्रेणीझैँ रम्यताको तालमा छमछमी गरेर नाँच्न थाल्छन् ।
भोगाइलाई भाग गर्दागर्दा भागफलमा शेष लागेको यही ज्ञान हो, जीवन । अहिले अलिअलि हात लागेको छ । लेख्न र लेख्नका लागि कल्पिने आधारशिला बनेका ती तीतामीठा अनुभूति र सोका फड्के साक्षी बनेका बालसखाहरु आज सबैजसो जीवनमा वैपरित्य दिशामा छुटेका रेलझैँ भएका छन् । एउटा घामकीरी समात्न जाँदा हराएका अन्य थुप्रै घामकीरीहरु भित्री खेतका ससाना झाडीमा हराएझैँ । जीवन भनेको सम्झँदै बाँच्दै गर्ने मेसो रहेछ । विगत मह हो जो जति खाए पनि नअघाइने । वर्तमान तीतेपातीझैँ कलबिख तीतो हुँदोरहेछ भन्ने ज्ञान अहिले जो व्यवहार विश्वविद्यालयले दिएको छ । यसैमा मख्ख परेर खुसीले फुलेल भएको छु । न पाठ्यक्रम, न पाठ्यपुस्तक, न गुरू, न कक्षा । भोगियो अनि स्वतःस्फूर्त सिकियो । जीवन पढियो, अनवरत बालापनमा खेल्दै र युवावय समस्यामा झेल्दै । नचाहँदा नचाहँदै सिकियो । नाइँनाइँ भन्दाभन्दै जानियो ।
अहिले आफ्ना थाप्लामा बोझ बन्न थालेपछि झोलामा दसैँ बोकेर आफैँले टार्न थालेको दशक नाघिसक्यो । भाइहरु विदेश बत्तिनुभन्दा अघिसम्म रामेछापबाटै भए पनि जखमले खसी घिस्याउँदै दसैँदसैँमा लेराउँथे । तीन भाइ हामी । दुई भाइको घर टीकाथली । अहिलेको महालक्ष्मी नगरपलिकामा । वल्लो गल्ली पल्लो गल्ली मात्र फरक । माइलो अलि पर कपनमा । ऊसँग लक्ष्मी पनि अलि धेरै खुसी भएकीले होला आफैँ जोरजाम गथ्र्यो । ‘सान्कान्छो र ठूले एकै ठाउँ छौँ मिलेर चाडबाड मान’ मायालु भावमा भन्नुहुन्थ्यो बा ।
घराँ बाको आदेश काट्ने हिम्मत कहिल्यै कसैले गरेन । अझै गरेको छैन । छोरी नभाको हाम्रो घर औपचारिकरुपमा बेगल भएको छैन । अनि हामी सगोलमा पनि छैनौं । आफ्नो मानो खाएर अर्काको कुरा गर्ने बानी हामीले कहिल्यै जानेनौँ । पसिनाले बँचाएको छ यतिखेरसम्म, हामी सबै दाजुभाइलाई । दुई भाइ विदेशमा पसिना चुहाउँदै श्रमजीवी भा’का छन् । मचाहिँ देशमै पसिना निकालेर श्रमजीवी र अलिकति कलमजीवी भएको छु ।
हाम्रो घरमा बा कम्युनिस्ट पार्टीको प्राधिकारसम्पन्न त्यस्तो ‘सुप्रिमो’ हुनुहुन्थ्यो जसका अघि हामी पोलिटब्युरोमा रहेर निर्णय मान्ने फड्के साक्षीजस्ता थियौँ । राम्ररी परिवार सञ्चालन गर्नु पनि पार्टी चलाउनुजस्तै रहेछ । वहाँको कमाइमा बसुन्जेल हामीले बाका आदेशमय फर्मानलाई त्यसरी नै मानेऊँ जसरी ‘गिरिजा बाउ बाँचुन्जेल कांग्रेसमा उनको रजगज रहेको थियो ।’
बा जो दमडी र सांस्कारी हिसाबमा अति कडा हुनुहुन्थ्यो । केटाकेटीमा उपध्रो गर्दा बाले पिटेका सम्झनाहरु मनका कुनामा पत्रे चट्टान बनेर खाँदिएका छन् । सम्झनामा ‘आउट डेटेड’ हुन लागेका ममोरी कार्डबाट अहिले फुत्त निकालेर शततः निफन्न पाइएको छ । हलौँ हुन्छ छाती पुराना कुरा कोरल्न पाउँदामा पनि । त्यतिबेला ननिका लागे पनि अहिलेचाहिँ ती अनेकानेक उपध्रामय सम्झनाले आल्हादित बनाएरै छाड्छन् ।
‘बाउले सदाएको छोरो र आमाले अह्राएकी छोरी’ उखानलाई म अहिले पनि छापामार शैलीमा कुम हल्लाएरै स्यालुट गर्छु । आमाबाउले जस्तो बनाउन खोज्छन् सन्तान त्यस्तै बन्ने रहेछन् । अहिले म आफ्ना सन्तानमा त्यही कुरा कार्बन कपीझैँ अनुभूत गरिरहेछु ।
हाम्रा बा नचाहिने काम नगर्ने तर चाहिने काममा खर्चबर्चको राँटा रहनै नदिने गरी व्यवहार चलाउने सामान्य मान्छे हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ । ठूलो मुख बाउने बानी थिएन, वहाँको । बेलाबेला गोरखधन्दाका सीप हामीलाई सिकाउनु हुन्थ्यो । मैले धेरै सीपहरु मेरा बालाई गुरू थापेर सिकेको छु । अनुच्छेद र संकथन लेख्न विश्वविद्यालयको अध्ययनले सिकायो होला ! ठूला कुरा गर्दिनँ म, तर गर्वका साथ भन्छु– ‘यो जीवनमा मैले आफूलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउन जहिले जेजे सिकेँ । सिकेको छु । ती सबै मेरा बाका आशीषका प्रसादहरु हुन् भन्न पाउँदा गर्वले छाती फुलेल हुन्छ ।
बा भन्नुहुन्थ्यो– ‘सफल र असल हुनु दुई फरक–फरक कुरा हुन् । यी दुईमा अप्ठेरो बेलामा एकलाई छान्नु प¥यो भने पछिल्लोचाहिँ रोज्नू ।’ दुई भाइ के गर्छन् त्यो मलाई मतलब भएन । म भने पछिल्लो शब्दका कित्तामा ससिम भएरै जोडिएको रहेछु ।
बहत्तरको दसैँमा बा अमेरिका भ्रमणमा जानु भएकाले र दुवै भाइहरु अमेरिकी आप्रवासी भएकाले बाको आज्ञा शिरोपर गर्दै मैले आफैँले जानी नजानी घरमा जमरा राखेँ । देवी पूजनोत्सवमा भाग लिएँ । सप्ठेरा ठाउँ संस्कृतमा र अप्ठेरा ठाउँ नेपाली भाषाटीका वाँच्दै चण्डीपाठ गरेँ । जमरा पूर्वपट्टि ढल्किएनन् । घरबूढीका सल्लाहानुसार पत्रिकाले छोपियो । जसै पूर्व ढल्किए, सो ढल्काइलाई ‘स्काइप’ प्रयोग गरेर बालाई नेदेखाइ धरै मिलेन । सात समुद्रपारिबाट बाले मैले न्याशध्यानमय पाठपूजा गरेर नौरथाको मैजारो गरेकामा सफलताको तोकादेश लगाइदिनु भयो । अनि मात्र मन शान्त भयो ।
बल्ल यहाँ घरस्तरीय केबिनेट बस्यो । पत्नीले गृह मन्त्रालय सम्हालेकीले उनको हंकीडंकी बढी नै चल्छ । नेपालको केबिनेटमा गृहमन्त्रीको सानजस्तो । ‘कमाइधमाइ नल्याए ज्वाइँकन दोष, पकाइतुल्याइ नदिए छोरीकन दोष’ भन्ने प्राचीन आहानमा चलेका छौँ, हामी अर्वाचीन दुई जोईपोइ । देश चलाउनभन्दा गाह्रो छ घर चलाउन । कहिलेकाहीँ उनका तर्फबाट बहस थालिन्छ । म प्रत्येक पेसीमा तर्क नभएको प्रतिवादीको कानुन व्यवसायीझैँ भई भाका मात्र सारेर तारिख थापिरहेको हुन्छु । हो पनि, घर भनेको देश नै हो । विविध कार्यान्वितिका फायलहरु घरव्यवहारमा मुल्तवी रहेका हुन्छन् । सीमित बजेटमा असीमित विकासका सूचकहरु पार लगाउँदै सन्तानका पखेँटामा प्वाँख हाल्नुछ । देशमा काम छैन । काम पाए दाम छैन । विदेश बत्तिने आशाले उफ्रिन थालेपछि अभिभावक हुनुको बोझले घाँटीमाथिको जाँतो जो बनाएको छ ।
‘बिते हूए कल’ भनेझैँ फेरि पुरानिएका दिनहरु नै ‘रिल लाइफ’ बनेर ‘रियल लाइफ’मा आउन थाल्दा ठिटो बाछोले दूधका लोभमा माउको कल्चौँडामा धम्का हान्दा मुखमा आएको फिँजको मिठासले विगतको गुन्द्रीमा आरामले सुताउन लैजाँदो रै’छ ।
घरपायक जागिरे हुनुहुन्थ्यो बा । खटालु भार्या हुनुहुन्थ्यो आमा । ‘खान पुगोस् दिन पुगोस्’ भन्ने वाक्यांशझैँ ती दिनमा परिवारमा लाउन–खानको कुनै पर्वाह थिएन । उड्नेमा हेलिकप्टर र गुड्नेमा गाडीमात्र खाइएन होला, केटाकेटीमा । जे पनि पच्ने । रूच्ने । खायो, दौडियो । दौडियो, खायो । ‘आमाको होटल र बाउको लज’ फ्री हुँदा त होनि मानिसका छाउराछाउरीले मस्ती गर्ने । आफ्नो कमाइ भएपछि त फाँकमुठीमा पनि लोभ लाग्दो रहेछ ।
हुन पनि ‘बाउले दिएको भैँसीभन्दा आफूले बाटेको दाम्लाको माया हुन्छ’ भन्थे बूढापाकाहरु । गमी ल्याउँदा लाग्छ, हो रहेछ । सोह्रैआना सत्य रहेछ । जतिसुकै स्थुल पुस्तकका पोथी रटान गर्नुभन्दा अभावको जाँतोमा पिसिएर, दुःखको पिङमा मच्चिएर जान्नु र सिक्नु जीवनभरिका लागि नै अकाट्य ज्ञानगंगा पिउनुजस्तै हो ।
जिम्मेवारीले गह्रौँ भएर थिच्न थालेपछि दसैँका रहरहरु क्रमशः बयेलिएका हुन् । जीवनका संकथनहरुमा ‘बाले दिएको भैँसीभन्दा आफूले बाटेको दाम्लाको माया बढी हुन्छ’ भन्ने उखानले घर गरेको हुँदो रै’छ । सकसको सार्थक परिभाषा वाच्यार्थमा भन्दा कार्यार्थमा तीक्ष्ण पाइँदो रै’छ । यद्यपि बालापन भावार्थमा टिकेको हुँदो रै’छ ।
टुकुटुकु हिँड्न थालेपछि दसैँका सम्झनाहरु लहर बनेर आएका छन् । केरा पकाउन माटाको खाल्डो खन्दा हामी सिँगाने केटाकेटीहरु लहरै बसेर हेर्दथ्यौँ । परालले पोेलेको पिरो धूवाँ आँखामा आएको चिप्रामिश्रित आँसुलाई ससाना हातले पुसेको सम्झना आलो भएको छ ।
जीवनमा धेरै दसैँ आए, गए । कति मीठा हुन्थे विगतका दसैँहरु । बालीमा लुगा सिउने दमाईले चलाएको मिसिनको खिटीटी आवाजले एकातिरबाट दसैँलाई बोलाउँथ्यो भने अर्कोतिरबाट चिउरा कुट्न ढिकीमा हालिएका घान र तिनका आला वासनाले तनमात्र लोभ्याउँथेन । मुखमा लोभका ¥याल पनि निकालिदिन्थ्यो । हप्ता–पन्ध्र दिन लगाएर पकाएका केराका घरीबाट उत्सर्जित वासनाले मनको पहाडमा एकाएक पहिरो खसाउँथ्यो । आमा र बाले भनेका आदेशात्मक भावका पहेलीहरु मान्दामान्दै पनि केटाकेटी बुद्धिले गरेका कतिपय ओ¥याइँहरु आज सम्झँदा पनि हर्षाश्रुमय भावमा टप्कन्छन् ।
पाँच–दस रूपैयाँ दक्षिणाका लागि हुरूरू गर्दै मावल र बूढोघर गइन्थ्यो । विराटनगर कञ्चनबारीका सम्झनाहरु पनि चुरेझैँ अझै ठडिएका छन् । झापा र इनरूवाका भलिभाँती कुराहरु यो सम्झौटोमा सप्पै लेराउन सकिनँ । कुनै समय लामो अवकाश मिल्यो भने कितापै बनाउनु पर्ला भन्ने सोच राखेको छु ।
तराईमा जन्मेर हुर्केर तारूण्यवय हाँसिल गरेका मेरासामु अनगिन्ती लेखनीका फाँकीहरु छन्, तिनीहरुलाई अनेक विधोपविधामा आलेखन गर्न सकिन्छ । कतै ती कविताका श्लोक हुन सक्छन् । कतै ती आख्यान र कतैकतै निबन्धका संकथनहरु हुन सक्छन् । जीवनमा लेखिएका कुराभन्दा नलेखिएका कुराहरु नै अधिक हुने रहेछन् । एउटा लेखकले नदीझैँ बगिरहन सक्नुपर्ने रहेछ । जीवननिर्वाहका क्रममा भोगेका उहापोहहरु नै समाजलाई दिने हो । कलात्मक बान्कीका साथ आफूमा भएका सफल सोचले भावी दिनमा मार्गशर्दन गर्ने गर्दा रहेछन् ।